Home Wararka Al Shabaab iyo ciidamada Galmudug oo ku dagaalamaya degaanka Camaara
Al Shabaab iyo ciidamada Galmudug oo ku dagaalamaya degaanka Camaara
Wararka ka imaanaya deegaanka Camaara ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug iyo dowladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-shabaaab uu hada ka socdo deegaankaas. Saraakiisha Howlgalkaan Hogaaminaysa ayaa sheegeen in ciidamada ay ku hareereysan yihiin Deegaankaasi iyo Deegaano ka ag dhow waxaana uu dagaal xooggan u dhaxeeya.
Dagaalkaan ayaa waxa uu daba socdaa dagaalo kale oo horay uga dhacay degaanka bacaadweyn. Ciidamada Dowlada iyo Daraawiishta Galmudug iyo Ciidamo uu hogaaminayo Saadaq Joon oo isgarabsanaya ayaa Muda Todobaad ka badan waxa ay Alshabaab Dagaalo Culus kula galeen Deegaano ka tirsan Gobolka Mudug waxaana lagula wareegay Meelo badan oo Muhiima. Saraakiisha ayaa sheegay iney sii wadi doonaan howlgalada ka dhan ah dagaalamayaasha Al-shabaab ee looga saarayo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.